जन्मेको बार अनुसार नै तपाई कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ ? बार अनुसार मानिसको स्वभाव र भाग्य हेर्नुहोस्
धार्मिक मान्यता अनुसार जुनसुकै मानिसको पनि जन्मेको बार अनुसारको भाग्य फरक फरक हुने गर्छ। त्यसैले हरेकको जन्म बार र समयअनुसार जन्मकुण्डली बनाउने वा भविष्यवाणी गर्ने गरिन्छ ।
यहिअनुसार आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहने गरेको ज्योतिष शास्त्रीहरुले बताएका छन। त्यसैगरी आइतबार सूर्यको दिन हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो ।त्यसैगरी मंगलवार मंगलको बुधवार बुधको प्रभाव पर्दछ । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । यी ग्रहहरुले जीवन निकै प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले आफु जन्मेको बार अनुसारको भाग्य यसप्रकारकोरहनेगर्छ।
त्यसैले कुन बार जानेको मानिसको जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्छ त जानी राखौं ;
आइतवार जन्मेका व्यक्तिहरुको एकदम भाग्यमानी हुन्छन। उनीहरुको लामो आयु सम्म बाँच्न सफल हुन्छन। यी व्यक्तिहरु निकै कम बोल्ने र पढाइमा समेत अब्बल हुने गर्छन।यस वार जन्मिने हरु धर्मप्रति आस्था राख्ने खालका हुन्छन। तर यस दिन जन्मेका व्यक्तिहरुलाई २० देखि २२ वर्षको उमेर सम्म दुःख कष्ट हुन् गर्छ ।तर यिनीहरुले २२ वर्षको उमेर पछि भने अधिक धन लाभ गर्ने अवसर पाउने छन ।
सोमबार जन्मिने व्यक्तिहरु कला कुशल र बहादुर हुनुका साथै बोलीमा निकै मिजासिलो हुन्छन । यस्ता व्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ किनभने उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छ । यो वार जन्मिने ब्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासको रोग हुन सक्छ यस्ता ब्यक्तिलाई ९, १२, २७ वर्षमा कष्ट हुन्छ ।
मंगलवार जन्म भएका व्यक्तिहरु निकै भाग्यशाली र धनवान हुने गर्छन। तर यस दिन जन्मेका महिलाहरु भने निकै कठोर र अकस्मात रिसाई हाल्ने स्वभावका हुन्छन।
यस वार जन्मेका व्यक्तिहरु धर्म कर्ममा साथै आफ्नो काममा निकै चासो दिने गर्छन साथै यिनीहरु धन सम्पतिको सवालमा पनि अब्बल हुन्छन। यिनीहरुलाई ८ र २२ वर्षको उमेरमा केहि रोग वा कष्ट पर्ने भएपनि जीवन सामान्य रहन्छ।
बिहिवार जन्मिने पुरुषहरु निकै विद्धान र पराक्रमी हुने गर्छन। विहीबार जन्मिनेहरुलाई ७, १२, १३, १६ र ३० वर्षमा संकट पर्छ ।तर ३० वर्ष उमेर नाघे पछि यिनीहरुको भाग्य खुल्ने र सोचेभन्दा बढी धन सम्पति कमाउने अवसर मिल्नेछ।
शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिहरु रोमान्चक स्वभावका हुन्छ। मधुर वाणीका कारण सबैको मन जित्ने यिनीहरुको बिशेष स्वभाव हुन्छ। यस बार जन्मिने व्यक्तिहरुलाई २० र २४ वर्षको उमेरमा दुख कष्ट देखिने भे पनि कडा मेहनतका बाबजुत जीवनमा ठुलो उन्नति प्रगति गर्ने अधिक सम्भवना रहने गर्दछ।
बिशेषगरी शनिवारको दिन जन्मेका व्यक्तिहरु कर्म भन्दा पनि बढी भाग्यमा बिश्वाश गर्ने खालका हुन्छन। यी व्यक्तिहरुले सुरुवाती दिनहरुमा निकै दुख , कष्ट भोग्नु परेता पनि जीवनमा अधिक सुख सयल भोग गर्दछन। यस दिन जन्मेका व्यक्तिहरुले २० ,२५ र ४५ वर्षमा केहि त्यस पश्चात भने जीवन सुखी र खुसिका साथ बित्ने छ।
प्रकाशित : शनिबार, चैत १६, २०७५१४:५७
तपाईको हत्केलामा पनि ‘X’ को चिन्ह छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ यसको रहस्य!